RTAD Resumes Its Services | Myanmar Business Today
HomeAutomobileRTAD Resumes Its Services
Road Transport Administration Department (RTAD) announced that it will resume driving trainings and driving tests starting from today (Aug 4) since the health authority has managed to contain the pandemic in the country to certain extend.
The department will allow online booking for people who want to sit for tests for ‘D’ license and ‘E’ license. But, online booking for ‘B’ license driving test is not available.
In addition to that, car owners will not need to god to RATD office in Ywarthargyi for license extension and vehicle inspection, instead, they can do it at the Eastern District RATD office.
The department suspended drivers trainings and driving tests since March 23.
Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ် တားဆီး ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်၍ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းအသိပညာပေး သင်တန်းများ နှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖြေဆိုစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို သြဂုတ် ၄ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်မည်ဟု ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ဇူလိုင် ၃၀ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း‘ခ’ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသစ် မှလွဲ၍ “ဃ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် “င” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များကို Online Booking ရယူ ဖြေဆိုနိုင်မည်ဟုသိရသည်။
ထို့အပြင် ယာဉ်လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးခြင်းတွင် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းကို ရွာသာကြီးရှိ(ကညန) ရုံးသို့ သွားရောက်ရန်မလိုပဲ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်ကညနရုံးတွင် ပြန်လည် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းအသိပညာပေး သင်တန်းများ နှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖြေဆိုစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှစတင်ကာရပ်နားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Previous articleTrueMoney Cuts Transfer Rates by 30%
Next articleOoredoo Myanmar’s Revenue Increased by 8 Percent in the First Half of 2020